အမေရိကန်ခရီးသည် ကာလတိုအတွင်း တိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသော်လည်း Horizon | သတင်း
တည်နေရာ: ပင်မစာမျက်နှာ » Post » သတင်း » US ခရီးသွားလာမှုသည် အချိန်တိုအတွင်း တိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသော်လည်း Horizon မှ Headwinds
လကွောငျးသယျပို့ဆောငျရေး • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • ခရီးလမ်းဆုံး • အစိုးရသတင်းများ • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • အစည်းအဝေးများ (MICE) • သတင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
US ခရီးသွားလာမှုသည် အချိန်တိုအတွင်း တိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသော်လည်း Horizon မှ Headwinds
Pixabay မှ kalhh ၏ ဓါတ်ပုံအား ကျေးဇူးပြု၍
ရက်ပိုင်းအတွင်း အမေရိကန် ၎င်း၏ Covid-19 စမ်းသပ်မှုလိုအပ်ချက်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ ဘို့ အဝင်လေကြောင်းခရီးသည်များအပြည့်အစုံကို US Travel Association မှ ထုတ်ပြန်သည်။ ခရီးအတွက် နှစ်ပတ်လည် ခန့်မှန်းချက် 2026 ခုနှစ်အထိ—ခရီးသွားအသုံးစရိတ်နှင့် ပမာဏနှစ်ခုလုံးအပါအဝင်—ငွေကြေးဖောင်းပွမှုမြင့်တက်နေသော်လည်း ခရီးသွားကဏ္ဍအားလုံးသည် ၀ယ်လိုအားနှင့် စားသုံးသူစုဆောင်းမှုများကြောင့် ကာလတိုအတွင်း မြင့်တက်လာမည့်စီမံကိန်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းသည် ကြာရှည်မည်ဟု မျှော်လင့်မထားသဖြင့် ခန့်မှန်းချက်၏ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် တိုးတက်မှု နှေးကွေးသွားစေသည်။ အဆိုပါ ခန့်မှန်းချက်၏ နိုင်ငံတကာ အစိတ်အပိုင်းကို ယခုလ အစောပိုင်းတွင် အသင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ IPW ကုန်စည်ပြပွဲ.
US Travel ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ $1.05 trillion (ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအတွက် ချိန်ညှိထားသော 2019 ဒေါ်လာ) သည် 2022 ခုနှစ်တွင် United States တွင် ခရီးသွားလာရန် သုံးစွဲမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသော်လည်း ၎င်းသည် 10 အဆင့်အောက် 2019% နှင့် 16 တွင် ဖြစ်သင့်သည့် 2022% အောက်သာ ရှိသေးသည်။ ကပ်ရောဂါ။ အောက်ပါဇယားသည် 2026 ခုနှစ်အထိ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအတွက် ချိန်ညှိထားသော နှစ်စဉ်အသုံးစရိတ် ခန့်မှန်းချက်များကို ထင်ဟပ်ပါသည်။
Tourism Economics ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အဆိုပါ ခန့်မှန်းချက်တွင် ပြည်တွင်းစီးပွားရေး ခရီးသွားပမာဏသည် 81 တွင် ကူးစက်ရောဂါအကြိုအဆင့်၏ 2022% နှင့် 96 တွင် 2023% သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအတွက် ချိန်ညှိလိုက်သောအခါတွင် ပြည်တွင်းစီးပွားရေး ခရီးသွားအသုံးစရိတ်သည် အပြည့်အဝ ပြန်လည်ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်၏အကွာအဝေးအတွင်း ကပ်ရောဂါအကြိုအဆင့်များ။
US Travel သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ခရီးသွားကဏ္ဍ ပြန်လည်နာလန်ထူလာစေရန် အရှိန်မြှင့်ပေးမည့် ဖက်ဒရယ်မူဝါဒများအတွက် ဆော်သြနေသည်။
တစ်ဦးအတွက် မကြာသေးမီကစာ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Janet Yellen အား US Travel မှ ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းစရိတ် ဖြတ်တောက်မှု ယာယီ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးနှင့် လုပ်ငန်း စားသောက်ကုန် အတွက် အပြည့်အ၀ သက်တမ်းတိုးခြင်း ပါ၀င်သည့် အခွန် တိုးပေးသည့် ပက်ကေ့ဂျ်တွင် အေဂျင်စီ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှု ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤမူဝါဒများသည် US Travel's အတွက် အဓိက ဦးစားပေးများဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးများဆိုသည်မှာ စီးပွားရေးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကို ဆိုလိုသည်။
ပြည်တွင်းအပန်းဖြေခရီးသွားလာမှုသည် မဝေးတော့သောကာလတွင် US ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး ပြန်လည်ဦးမော့လာစေရန် ဆက်လက်တွန်းအားပေးနေမည်ဖြစ်သော်လည်း သုံးစွဲမှုသည် 46 တွင်ဖြစ်သင့်သည့် ကပ်ရောဂါမဖြစ်ပါက 2022 တွင်ဖြစ်သင့်သည့်ဒေါ်လာ XNUMX ဘီလီယံအောက်ကျန်ရှိနေမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
နိုင်ငံတကာမှ ခရီးသွားများသည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မကြာသေးမီက ရုပ်သိမ်းခြင်း။ Inbound အကြိုထွက်ခွာစမ်းသပ်မှု လိုအပ်ချက်။ ကဏ္ဍသည် ကျန်ရှိသော 2022 တွင် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာရန် ခန့်မှန်းထားပြီး 2023-2026 တွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကြီးထွားလာမည်ဖြစ်သည်။ ကပ်ရောဂါအကြိုအဆင့် (ပမာဏနှင့် အသုံးစရိတ်) မှ 2025 ခုနှစ်အထိ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရန် မျှော်မှန်းထားမည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော်လည်း မူဝါဒအပြောင်းအလဲများသည် ထိုအချိန်ဇယားကို အရှိန်မြှင့်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ US သည် ဧည့်သည်ဗီဇာအတွက် စောင့်ဆိုင်းချိန်ကို ရက်ပေါင်း 30 ထက်နည်းအောင် လျှော့ချပါက၊ US သည် 2.2 နှစ်ကုန်တွင် နောက်ထပ် နိုင်ငံတကာဧည့်သည် 5.2 သန်းနှင့် $2022 ဘီလီယံ အသုံးစရိတ်ကို ရရှိနိုင်သည်။ မူဝါဒ အဆိုပြုချက်များစွာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဗီဇာလုပ်ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ရယူရန်-
• အန္တရာယ်နည်းသော ဗီဇာအင်တာဗျူးများတွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်နည်းပညာကို အသုံးပြုရန်အတွက် ရှေ့ပြေးပရိုဂရမ်တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ပါ
• ဝယ်လိုအားများသော သံရုံးများနှင့် ကောင်စစ်ဝန်ရုံးများသို့ ဗီဇာထုတ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပါ။
• လည်ပတ်သူဗီဇာအားလုံးကို ယာယီသက်တမ်းတိုးရန် သို့မဟုတ် ဗီဇာသက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် လျှောက်ထားသူများအတွက် အထူးသဖြင့် US တွင် လက်ရှိနေထိုင်သူများအတွက် တရားဝင်သက်တမ်းတိုးခြင်းကို ရှာဖွေနေသော လျှောက်ထားသူများအတွက် ဗီဇာသက်တမ်းတိုးခြင်း
• US တွင်နေထိုင်စဉ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးရန် အန္တရာယ်နည်းသော ဗီဇာကိုင်ဆောင်ထားသူအချို့အား US တွင်ခွင့်ပြုရန် စဉ်းစားပါ။
• အလယ်အလတ်မှ အကြီးစားအဖွဲ့ခရီးသွားများအတွက် ဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုထိရောက်စေရန် နည်းလမ်းအသစ်များ တီထွင်ပါ။
• ရွှေ့ဆိုင်းပြီး အဆိုပြုထားသည့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူမဟုတ်သော ဗီဇာကြေး တိုးမြှင့်မှုကို ပြန်လည်စဉ်းစားပါ။
US Travel သည် ဆောင်းဦး 2022 တွင် ၎င်း၏ နှစ်ပတ်လည် ခန့်မှန်းချက်အား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။
ကျေးဇူးပြု ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ခန့်မှန်းချက်အပြည့်အစုံကိုကြည့်ရှုရန်။
US Travel အကြောင်း နောက်ထပ်သတင်းများ
၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ နိုင်ငံတကာ visitors ည့်သည်များ | စီးပွားရေး | အပန်းဖြေခရီးသွား | ခရီးသွားလုပ်ငန်း | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
၂၀၂၆ ခုနှစ် ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို မိုင်ယာမီတွင် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု|
စစ်မှန်သော Caribbean Carnival အတွေ့အကြုံအတွက် ဤနွေရာသီတွင် Nevis သို့သွားပါ။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း|
World Tourism Network 2022 အာဖရိကနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း|
ဒူဘိုင်းသည် မွန်ဂိုလီယားဖက်ရှင်၊ ကုလားအုတ်နီနှင့် Le Meridien ကိုနှစ်သက်သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း|
စီးပွားရေး နိုင်ငံတကာ visitors ည့်သည်များ အပန်းဖြေခရီးသွား ခရီးသွားလုပ်ငန်း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
မီယာမီမှာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လေယာဉ် ပျက်ကျခဲ့ပါတယ်။
AHLA သည် US ဟိုတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကာအကွယ်ပေးရန် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လိုလားပါသည်။
Fraport နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး 2022- အစုရှယ်ယာရှင်များ...
အခိုးခံရသော Boeing နှင့် ...
US Travel သည် ပြည်တွင်းခရီးသွားများအတွက် ခန့်မှန်းချက်အသစ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဝင်ငွေအသစ်အတွက် Cathay Pacific နှင့် Saber မိတ်ဖက်...
UAE နှင့် Maldives တို့သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဟိုတယ်ဝင်ငွေများကို လွှမ်းမိုးထားသည်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ၀င်ရောက်ခွင့် ရုရှားတားမြစ်...
ATM စက်တွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဈေးကွက်ကို ဆွဲဆောင်မည့် မလေးရှားခရီးသွားလုပ်ငန်း...
WTTC တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် ဆိုက်ဘာခံနိုင်ရည်ရှိရေး အစီရင်ခံစာသစ်ကို ထုတ်ပြန်...
တရုတ် အပိုပစ္စည်း တွေက ရုရှားကို ကယ်တင်မှာလား...
လမ်းညွှန်မှုအသစ်အရ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Sarovar Premiere Jaipur
ရှန်ဟိုင်းသည် မြို့လုံးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုအသစ်ကို ချမှတ်လိုက်သည်။
IMEX ပေါ်လစီဖိုရမ်- လုပ်ငန်းပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက် စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်း။
ရေရှည်တည်တံ့သော ခရီးသွားလာရေး၏ နှလုံးသားတွင် လူများကို နေရာချပါ...
အာဖရိကန်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ အမျိုးသမီးများသည် မဟာဗျူဟာမြောက် ရှေ့သို့လှမ်းတက်သည်။
ဘတ်ဂျက်သတိရှိမှု မြင့်တက်လာခြင်းမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိမည့် တူရကီ...
ဂျမေကာဝန်ကြီးက ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြည့်အ၀ ဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
တန်ဖိုးမြင့်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာမှ အကြံပြုချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်...
နီပေါတွင် လေယာဉ်ပျက်ကျမှု- လူတိုင်းသေပြီ။
ယူဂန်ဒါတွင် လုပ်ဆောင်ရန် အကောင်းဆုံး Safari အတွေ့အကြုံ ၅ ခု
ကနေဒါနိုင်ငံရှိ Lynx Air သည် ခွေးငယ်လေးများနှင့် ကြောင်များကို ခွင့်ပြုပေးသည်...
Hyatt သည် ရုရှားတွင် ဆက်လက်ပိတ်နေသည်။
Uniglobe Travel သည် ဦးစားပေး တင်သွင်းသူအသစ်ကို ခန့်ထားသည်။
ဂျမေကာဒေသ ခရီးသွား လုပ်ငန်း- ပြန်လည် စိတ်ကူးယဉ်ပြီး အသစ်
ဟာဝိုင်အီခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ အနာဂတ်သစ်အတွက် အာဏာသိမ်းမှု။
သြစတြီးယား ရထားတိုက်မှုတွင် အနည်းဆုံး လူတစ်ဦး သေဆုံးပြီး ၁၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
လယ်သမားများမှ ဆန္ဒပြသူများမှ ဝိုင်ထုတ်လုပ်သူများအထိ
မေလ ၁ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက် World Tourism Network
CDC- Mask Order သည် ယခု အသက်ဝင်ဆဲဖြစ်သည်။
သူမဟာ စာရေးရတာကို နှစ်သက်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလတ်တွေကို အရမ်းအာရုံစိုက်ပါတယ်။